XAYEYSIINTA RAASHINKA EE BEERALEYDA LO'DA: NIDAAMYADA MASHIINADA QAYBINTA QUUDINTA - INFRASTRUCTURE
Sannad kasta tirada qalabka loo isticmaalo beeralayda ganacsigooda waxay kordhayaan. Gawaarida iyo farsameynta foosha ee ku saabsan beeraha waxay fududeeyaa foosha, waxay ka dhigtaa shuruudaha xayawaanka si wanaagsan uguna yareyneysa qiimaha wax soo-saarka. Qalabkaas waxaa ka mid ah bixiyeyaasha quudinta. Cunto-bixiyeyaasha ayaa la abuuray oo loo isticmaalo noocyada kala duwan ee beeraha xoolaha, oo ay ku jiraan beeraleyda iyo lo'da.
Ujeedada iyo mabda'a ficilka
Qalabka raashinka waa qalab khaas ah oo shaqadoodu tahay in la helo, gaadiidka iyo kala-bixinta quudinta iyo isku dhafka. Qaybiyayaalku waxay quudin karaan cagaarka cagaaran, dhuudhka, silage, isku-buufin aan caadi aheyn iyo isku darka beeraha, labadaba labada dhinac. Shuruudaha loogu talogalay quudinta:
hubinta midaysan, waqtiga saxda ah iyo saxnaanta qaybinta nuujinta (wakhtiga cuntada aan ka badnayn 30 daqiiqo qolkiiba);
qiyaasidda qaybinta cawska ee xayawaan kasta ama kooxdooda (is-beddelka caadiga ah waxaa loo oggol yahay in lagu quudiyo - 5%, xayawaanka dabka - 15%);
Cunnooyinka faddarada aan la oggolayn (celinta khasaaro aan ka badnayn 1%, lumis aan la oggolayn lama ogola);
ciriiri la'aanta ah ee isku darka laysku daro lama oggola;
qalabka waa inay ahaadaan badbaado xoolaha, oo ay ku jiraan iyo koronto.
Waxaa jira tiro badan oo qaybiyeyaal ah, waxaa lagu go'aamiyaa shuruudaha shaqadooda, noocyo kala duwan iyo xajmiyada beeraha, noocyo kala duwan oo xayawaan ah, oo leh heerar kala duwan oo otomaatig ah, iwm.
Nooca dhaqdhaqaaqa - joogtada iyo mobile;
habka qaybinta - hal-iyo-laba-dhinac;
marka loo eego awoodda rakibida - hal - iyo mid kaleba.
Dakhiileyaasha loogu talagalay quudinta loo isticmaalo beeraha waxay noqon kartaa:
degan - lagu rakibay gudaha beerta, oo si toos ah kor uga soo baxday ama gudaha feederiyeyaasha, iyo hal dhinac ama mid kale u qaybinayaan quudinta ka soo goosta, halkaasoo cunto ama isku dar ah lagu diyaariyo weelasha. Qeybaha quudinta ee joogtada ah waxay ku kala duwan yihiin nooca wakiilka wareejinta, mashiinka farsamada - qashinka, hydraulic, pneumatic iyo cufanimo. Gawaarida - waxay ku kala duwan yihiin nooca farsamada, suunka, xoqida ama silsiladda, waayo baabuurtu waxay inta badan isticmaalaan mishiin koronto;
mobile - Waxaa lagu dhejin karaa raashin meel kasta, u geey goobta kuna sii daa bacda. Waxaa lagu rakibay gawaarida xamuulka ama baabuurta (darawalnimada habka qaybinta ayaa laga soocayaa cirbaanaha) ama is-rogay, oo lagu rakibay qaabka baabuurka ama si buuxda madaxbannaan, oo badanaa loo shaqeeyo.
By nooca qaybinta
Badeecada quudinta, oo loo isticmaalo beeraha lo'du, waxay ku quudin karaan cuntada ku jira feederaha labada hal dhinac ama labada dhinacba.
Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad baratid sida loo sameeyo qaybta quudinta gacmahaaga.
Kala saarista xayeysiinta waxaa loo adeegsadaa kuwa loo qaybiyo moobiilka waxayna qeexeysaa inta ay ka iibsanayaan qaybiye bixiyeyaashu qaadi karaan. Sida caadiga ah, tani waxaa lagu go'aamiyaa tirooyinka dhejiyeyaasha tractors iyo xajinta kartida gaariga baabuurka ee naaska lagu rakibay. Celceliska cabbirka cabbirka quudinta cunnooyinka nafaqada ah waa 3.5-4.2 ton, uniaxial 1.1-3.0 tons.
Qeexaadaha iyo sharaxaadda moodooyinka caanka ah
Marka aad dooranayso quudin, sifooyinka waa in la tixgeliyaa. Waxay caadi u yihiin dhammaan noocyada (waxtarka, heerka quudinta quudinta, mugga wada shaqeynta) iyo gaar ahaan. Goobaha kala-saarayaasha ah waa xawaare ka mid ah cajaladda iyo isticmaalka awooda. Miisaanka - waa miisaan la qaado, xawaaraha dhaqdhaqaaqa inta lagu jiro gaadiidka iyo qaybinta, loo rogayo raadiye, cabbir guud. Moodooyinka ugu caansan ayaa ah labada nooc.
Bakhaarada quudinta joogtada ah waxaa loo isticmaalaa farmashiyo waaweyn oo leh dukaamada raashinka ah ee aad u baahan tahay si aad u kacsan uguna nashqadeeysid nuujinta, ama kuwa yaryar ee aan suurtagal ahayn in la isticmaalo warshadaha moobiilka sababtoo ah cabbirka qolka iyo quudinta.
Ma taqaanaa? Lo'da miisaankeedu yahay 450 kg maalintii waa in ay cunaan ilaa 17 kg oo cunto ah maalin kasta, iyada oo la tixgelinayo kaliya qalalan qallalan, xagaaga laga bilaabo 35 ilaa 70 kg oo quudin, taas oo ku xidhan dhalidda caanaha.
Kala-bixiyaha TVK-80B - Kombiyuutarka qaybta oo dhan noocyada quudinta adag. Waa suun la xirxiray oo lagu rakibay gudaha quudinta. Midka hal mar, leexo, 0.5 m ballaaran
Gawaarida waxaa laga helaa mishiinka korontada iyada oo loo marayo xajiyaha wareegga, kaas oo wadaya suunka. Cunto ka timid rajo helaha ayaa si siman loogu qaybiyey cajalad ku dhexjirta cuntada oo dhan ka dib, ka dib markii wareegtada wareega ay shaqeyso, lagu rakibay mid ka mid ah unugyada silsiladda.
quudinta dhererka hore - 74 m;
wax soo saarka - 38 t / h;
xayawaanka la qalo - 62;
korontada korantada - 5.5 kW.
Faa'iidada ugu weyn ee naas-nuujiyahani waa tamarta buuxda ee qaybinta raashinka. Isticmaalka ugu wax ku oolka leh ee ku jira xayawaanka ku dhow dhirta quudinta waa in la iska ilaaliyo in ka badan culeyska iyo qashinka gaasta ee dhismaha, wuxuu bixiyaa microclimate optimal.
KRS-15 - quudiyaha xayawaanka oo si adag loo jajabiyey iyo quudin leh, sida silage, hay, cagaar, iyo isku darka feed.
Baro qashinka iyo kaydinta qoryaha.
Tani waa qalabka furan ee furan oo lagu rakibay hoose ee feederiyaha. Waxay ka kooban tahay labo wadiiqo, oo isu barbardhigi kara oo isku wada duuban.
Qeybta shaqada - gawaarida xargaha xargaha, wuxuu ku yaallaa gudaha xayndaabka, oo uu ku socdo mashiinka korantada. Cunto ayaa laga quudin jiray tuubo ama xayeysiiyaha wareega xayndaabka ka dibna wuxuu ku faafaa qulqulka qashinka. Dareemku wuu xiraa marka boodhka ugu horreeya uu keeno gebi ahaanba.
quudinta dhererka hore - 40 m;
wax soo saarka - 15 t / h;
xayawaanka loo adeego - 180;
RK-50 raashinka raashinka oo leh weelka suunka ee ku yaalla qafaalka, wuxuu ku dhex jiraa beerta wuxuuna qaybiyaa quudinta jajaban.
Waxaa jira laba nooc oo noocaas ah - 100 iyo 200 oo madax ah oo leh hal iyo laba qalab-kala-saarayaasha, siday u kala horreeyaan.
Waxyaabaha ugu muhiimsani waa qalab isdabajoog ah, wareejiye udubdhexaad ah, hal illaa laba ilaa kontaroolayaal qaybiye ah iyo cutub koontarool. Gaadiid kastaa wuxuu leeyahay koronto u gaar ah.
Dhexdhexaadiye-xawaareyaha - wareejiyaha suunka qeybtii dhererka feederaha, kaas oo ka dhaqaaqaya hageellada, oo ku yaala marxaladda dushiisa fogaan ah 1600 mm ilaa 2600 mm dhulka. Meelaha foojignaanta ah waa inaysan ka ballaaranayn 1.4 m. Xawaaraha dhaqdhaqaaqa waxaa lagu maamulaa isbeddelka dalladaha ee gudbinta gawaarida, oo badalaya shan boos.
Cuntada waxay gashaa weelka helitaanka qalabka isdabajooga, oo laga soo dhejiyo xarig la dhexdhexaadiye oo ku yaal bartamaha sare ee korontada-qaybiyeyaal. Wuxuu u diraa nuujinta ugu horeysa ama labaad ee wareejinta-dhexdhexaadiyaha. Iyada oo gacan laga helayo quruxda wareegga ah, waxaa loo diraa feederiyaha dhinaca midigta ama bidixda marinka cuntada.
quudinta dhererka hore - 75 m;
wax soo saarka - 3-30 t / h;
xoolaha la adeegay - 200;
korontada korontada - 9 kW.
Waa muhiim! Isticmaalka quwadaha korontada ku shaqeeya ee beeraha lo'du (labadaba ha ahaato iyo mobile) waxay yareyneysaa qaylada, waxay ka caawisaa in laga fogaado qiiqa waxyeellada leh, oo aan waxyeelleynin xayawaanka, taas oo marka dambe ka dhigaysa xaalado ka fiican guryaha.
Kombiyuutarada quudinta xayawaanka waxaa loo isticmaali karaa dhammaan noocyada beeraha, halkaas oo cabbirka cabbirka dhismuhu uu u oggol yahay. Faa'iidadooda waa awoodda ay isugu darsamaan bixinta quudinta ee ka yimaada goobta kaydinta ama goosashada iyaga oo la qaybinayo iyaga oo kaneecada. Farsamooyinkaas ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa inta lagu jiro goosashada iyaga oo ah gawaarid iskiis u gaar ah. Isku-duwaha moobiilka-isku-darka cuntada ayaa si ballaaran loo isticmaalaa beeraha, bacrimintooda waa isku darka cuntada oo la raaco iyadoo lagu quudinayo nuujinta lo'da.
Universal Kept KTU-10 waxaa loo hirgeliyaa sida tractor tractor, loogu talagalay bixinta iyo qaybinta ee hay, silage, dalagga xidid, mass cagaaran, ama isku dhafka. Waxaa la wanaajiyay in ay la shaqeeyaan nooc kasta oo ka mid ah traktorka Belarus. Bakhshiistuhu wuxuu ka kooban yahay xargaha, wareejinta iyo xayawaanka yaryar ee isbeddelaya ee lagu riixo gidaarrada ku dul yaal dhinacyada. Farsamaynta waxaa loo adeegsadaa iyada oo loo marayo mashiinka wadada ee PTO. Intaa waxaa dheer, darawalka ayaa la quudin doonaa gadaal dambe, oo leh qalab haas oo lagu xakameynayo, oo laga xakameynayo baabuurta tareenka.
Waxaad baraneysaa MT3-892, MT3-1221, Kirovets K-700, Kirovets K-9000, T-170, MT3-80, Vladimirets T-25, MT3 320, MT3 82 iyo T-30 Traktors, taas oo loo adeegsan karo noocyo kala duwan oo shaqo ah.
Isbeddelka hordhaca ah ee qiyaasta kala-soocidda ee quudinta ayaa la sameeyaa iyadoo la adeegsanayo habka ratchet. Kadib, marka loading quudiyo, PTO-ga cagaha ku xiran yahay, gudbiyaha dheeriga ah wuxuu quudinayaa isku daridda quudinta ee beeraleyda, waxayna u diraan mashiinka iskutallaabta culeyska saaraya nuujiyayaasha. Heerka quudinta waxaa lagu xakameynayaa xawaaraha qulqulatadu socoto. Qaybinta raashinka waxay ku dhici kartaa mid ama labada dhinacba, iyada oo ku xidhan isbeddelka iyo dejinta mashiinka.
Waa muhiim! Waa in maskaxda lagu hayaa in ugu yaraan halbeegga KTU-10 uusan ka yarayn 6.5 m, ma aha mid ku habboon beeraha leh cillado dhuuban iyo meel bannaan.
Qaybta quudinta KTU-10 waxay leedahay sifooyinka soo socda:
Awoodda xamuulka - 3.5 tan;
mugga bunker - 10 m3;
wax soo saarka - 50 t / h;
Heerka quudinta - 3-25 kg / m (tirada talaabo - 6);
dhererka - 6175 mm;
width - 2300 mm;
dhererka - 2440 mm;
saldhig - 2.7 m;
track - 1.6 m;
Isticmaalka awoodda - 12.5 hp
RMM-5.0 - Quudin yar yar, oo ku shaqeynaysa sida KTU-10. Si kastaba ha noqotee, cabbirkoodu wuxuu u oggolaanayaa isticmaalka qaybiyaha qolalka qolalka cidhiidhiga ah. Diyaar garowsho shaqo leh Tareenada T-25, noocyo kala duwan oo ka mid ah traktor-ka Belarus, iyo sidoo kale Diktoorkii DT-20.
Tilmaamaha farsamo ee PMM 5.0:
qaadidda awoodda - 1.75 tan;
mugga bunker - 5 m3;
wax soo saarka - 3-38 t / h;
Heerka quudinta - 0,8-16 kg / m (tirada tallaabooyinka - 6);
dhererka - 5260 mm;
width - 1870 mm;
dhererka -1920 mm;
salka - 1 xagal;
track - 1.6 m
Ma taqaanaa? Meelaha ugu weyn ee xajinta dhaqdhaqaaqa leh, mugga qulqulka ayaa gaadhaya 24 m3, iyo awoodda qaadista waa 10 tan.
Mashiinka quudinta AKM-9 - Diyaar-bixiyaha isu-diyaarinta ah ee loogu talagalay karinta cuntada isku dhafan ee laga soocayo suntan, caws, silage, pellets iyo cunto lagu daro, oo loogu talagalay daaqsinka 800 ilaa 2,000 oo ah madaxa lo'da.
Waxay isku daraysaa qasacad lagu qalabeeyo 2-xawaaraha dheellitiran, mashiinka quudinta iyo cunto kariyaha. Dhab ahaantii, waa aqoon-isweydaarsi quudin, oo u oggolaanaya in lagu daro, diyaariyo loona qaybiyo quudinta. Sababtoo ah saldhiga uniaxial, nadiifinta dhulka iyo baaxadda, waa wax aad u firfircoon oo leh hufnaan wanaagsan. Wuxuu isku daraa quwad 1.4 ah, oo ay ku jiraan MTZ-82 iyo tareenada MTZ-80.
Tilmaamaha farsamada ee AKM-9:
mugga bunker - 9 m3;
wakhtiga diyaarinta - illaa 25 daqiiqo;
Wax-soo-saarka - 5 - 10 t / h;
dhererka - 4700 mm;
width - 2380 mm;
dhererka - 2550 mm;
width width - 2.7 m;
xagasha wareegga - 45 °.
Faa'iidooyinka isticmaalka warshadaynta quudinta
Isticmaalka quudinta ee daryeelka xoolaha ayaa siinaya faa'iidooyinka noocaas ah:
waxay yareysaa kharashka waqtiga iyo kharashka shaqada si loogu qaybiyo quudinta, fududeeynaayo iyo xawaareynta habka quudinta;
Isticmaalka isku-darka isku-darka ah ee isku-darka diyaarinta ayaa ka dhigaya suurtogalnimada in la hagaajiyo diyaargarowga quudinta iyo isku dhafka iyo isla markiiba ku quudi feedhaha;
isticmaalka qashin-bixiyeyaasha joogtada ah waxay kuu ogolaaneysaa in aad automatirto nuujinta iyo sida ugu fiicnaanta raashinka maalinlaha ah ee xayawaanka, taas oo si wax ku ool ah u saameeya kobcintooda iyo waxsoosaarkooda;
Isticmaalidda qaybiyeyaasha moobiilka ayaa u oggolaanaya in aysan si dhakhso ah u qaybin cuntada, laakiin sidoo kale in ay ku soo galaan beeraha, goobaha kaydinta ama wax soo saarka iyo u keenaan beeraha;
waxay yareyneysaa qiimaha alaabta.
Soo saarayaasha guryaha ee feederiyeyaashu waxay si wadajir ah ula shaqeeyaan beeraha waxayna u habeeyaan qaabka shuruudaha gaarka ah iyo shuruudaha macaamilka, taas oo u oggolaaneysa in loo isticmaalo si ka fiican sidii hore.